Soomaali dhaawac iyo boob hantiyadeed loogu geystay Koonfurta Afrika - Awdinle Online
Soomaali dhaawac iyo boob hantiyadeed loogu geystay Koonfurta Afrika
Weerar loo adeegsaday Mindiyo (Tooreey) oo ka dhacay Magaalada Bredasdorp oo qiyaastii (184,7 km) u jirta Magaalada Cape Town ee Dalkan Koonfur Afrika, ayaa lagu dhaawacay Xasan Cumar Jaliil, halka jirdil xoog leh loo gaystay Dhallinyarado la joogtay Goobtiisa Ganacsiga.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in dhaawaca Xasan uu yahay mid fudud, sidoo kale uu jiro jordin loo geystay, isla markaana Kooxaha Burcadda ah ay qaateen lacago iyo Agab kale oo yaalay Dukaanka.
Cabdullae Jaliil oo ay Walaalo yihiin Muwaadinka Soomaaliyeed ee la dhaawacay ayaa sheegay i Booliska ay helaeen Muuqaal ay duubtay Kaamirada, oo si toos ah looga dhex aqoonsan karo Burcadda.
Magaalada Bredasdorp, oo ah halka weerarka uu ka dhacay ayaa ah Magaalo-xeebeed ay Saldhig aad u weyn ku leeyihiin Ciidamada Cirka ee ugu badan ee Koonfur Afrika, waxaana sidoo kale kamid tahay meelaha ugu Amniga wanaagsan dalkaas.
Previous articleXisbiga C/raxmaan C/Shakuur oo walaac muujiyay, hal Arrin ay ka hadleen
Next articleDEG DEG: Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho